”အရင်က ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ဝယ်ယူရတဲ့ ဆေးခြောက်ဟာခုတော့ ကျန်းမာရေးအရ လိုအပ်ရင်ဗြောင်ပဲဝယ်ယူလို့ရပါပြီး။ ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်ချိုသာပြီး ဆင်းရဲသားရောဂါရှင်တွေ လက်လှမ်းမီတယ်” ဟု ဆေးခြောက်ဥပဒေ ကျွမ်းကျင်ကာလီဝု(ဖ်)က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ နယူးယောက်နှင့် နယူးဂျာစီပြည်နယ် များတွင် ဆေးခြောက်ကို တရားဝင်ဖြစ်လာ စေရန် ဥပဒေရေးရာကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်တွင် ဆေး ခြောက် တစ်အောင်စ အရောင်းပေါ်မှ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းအခွန်အဖြစ် ပေးဆောင်ရ လေသည်။ ဆေးခြောက် သုံးစွဲမှုကို ကန့်ကွက်သူ လု(ခ်)နီဖိုးရာတို့စ်က ”ဆေးခြောက်ကို အစိုးရကတရားဝင် ရောင်းပြီဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ပေါ့ဗျာ ဗြောင်ရောင်း ဗြောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပြီပေါ့”ဟု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ကို ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ငန်းတာဝ?
သက်တမ်းတိုးယာဉ်ကျပ်တည်းမှုသက်သာစေရန် အွန်လိုင်းဖြင့် စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြိုတင်ယူစနစ် ဇန်နဝါရ??
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားကြား ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလ??
စီရော်နယ်ဒို ကို အကောင်းဆုံး ဟန့်တား၍ ဗိုလ်လုပွဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဟု ရိုဒရီဂွက်ဇ် ကြုံး??